Indic Izikhombisi zokuThengiswa koTshintsho lweeNkcazo -Day Trade eminis ES500 | I-NQ100 - NinjaTrader 8 Xa unokufumana ithuba lokuthengisa ngokusebenzisa i-CycleTrader, kunzima ukwenza imali.
Bhalisa / iDemo
Thu, Julayi 18, 2019
Iimpawu zoThengiso zoBucala beSikimu
I-CycleTrader Iinkqubo zokuThengisa ngokuThengisa ngokuZenzekelayo -Izicwangciso
Sigijima kwi-NinjaTrader 7 & 8
Landa iDemoTRADER Demo
Iingxelo zabathengi - Izikhombisi - Juni 25th
Umsebenzi omkhulu Jerome !!! Le ntsha ye-CT09 Bare Delta Profile indicator isinika umngcele omkhulu wokungena nokuphuma kwimakethi. Sebenzisa iikhathi zakho zexesha elide ukucwangcisa urhwebo oluqinileyo. Unempembelelo enenzuzo xa uthemba izibalo !!! Lo omtsha usinika umgca omkhulu. Xa sithetha izolo, ndatsho i-7,400 yeeveki evekini ngee-CT zokudala kunye ne-312 ngeentengiso zobusuku bokugqibela kunye nezibonisi ezintsha emva kokuzilayisha kunye kunye ne-$ 2,500 namhlanje. Thanda i-CT09 ... Nasi ubungqina. ENKOSI!!
UJim R. Realtor / uMhlabi weSuku, i-CA
Iingxelo zabathengi - Izikhombisi - Juni 26th
Nditshiswe amaxesha ambalwa ngaphambili kwaye xa ndidibana noJerome malunga nezibonakaliso zakhe, ndambuza ukuba kutheni kulapho kulunge khona. Impendulo yakhe yayizama i-demo kwaye ibone kuqala. Ndenze oku kwaye namhlanje ndazithenga. Ndakwazi ukufumana ingongoma yentengo yokungena ngcono kunanini ngaphambili. Isibonakaliso esifanayo se-CT 09 sandi-ke sinika ithuba elihle kakhulu. Ndiyabulela uJerome ngokudala ezi zinto. Utshintsha indlela endithengisa ngayo kwaye ngoku ndiyifumana imali. Phinda i-1450 namhlanje kwi-1 ukuya kwi-4 inkampani kwi-ES 500.
URon J. Day Trader, eTucson, AZ
Iimpawu zoRhwebo ze-CycleTrader NT8
I-CycleTrader I-Smooth Charts NT8
I-CycleTrader Auto Trading Systems NT8
I-CycleTrader Systems I-P / L Umphathi we-NT8
Iimpawu zeCycleTrader / System NT7
I-CycleTrader Product Education
Idemo / Intengo
I-14 Day Trial
Impumelelo yeSan Fransisco
Hamba U kuLoba
© Copyright 1988 -2019 Bressert Trading Technology, LLC. - Thu, Julayi 18, 2019
Iingxelo zabathengi - Izikhombisi
Wow, iInkundla ezinkulu !!! Ndiyabona ngoku, ulungile! Ungangena kwixabiso elincinci kwaye uzive uthembele ngorhwebo ngamnye. Ndiyabonga ngokubonisa oku kum ... ukhupha i-$ 875 ngosuku lokuqala lokudlala ngeepateni. Unokuba ne Pot of GOLD! ENKOSI!
URenee R. Chicago
Iingxelo zabathengi - Izikhombisi - Juni 18th, 2019
Hi - ndiyithandile iinkqubo zakho zokurhweba. Ndenze iRandi ye-1,000 idola kuyo ngosuku lokuqala kunye ne-simulator akhawunti kumthengisi we-ninja. Ngoko ndawathenga namhlanje.
... NGOKUBA NGABANYE NABASEBENZI!
Sawubona uJerome, kufuneka ndixelele ukuba urhweba usebenzisa isibonakaliso somthamo ogqithisileyo uyamangalisa ...
Iingxelo zabathengi - Iinkqubo - Juni 11th, 2019
Ndandigqiba inyathelo elinye leNqanaba eliphezulu 50K lidibanisa kwiintsuku ze-11. 🙂 usebenzisa isicwangciso se-1003!
I-Gene - System Trader
Iingxelo zabathengi - Izikhombisi - Mhlawumbi 31st, 2019
UJerome- Wayenomhla olungileyo namhlanje kwindawo yam yokuqala kunye nezibonisi; icacise i-$ 1900 kwi-e-minis. Kwakufana nokufumana iiglasi kunye nokuzibeka, ukukwazi ukubona imarike ngokucacileyo ngeendlela ezingafumaneki kwenye indawo. - Ndiza kujikeleza kwaye ndigqibe ukuthenga kwam phezu kwethemba leveki-ntsuku.
... Ndiya kuthi, kwaye ndiza, ndingaze ndithengise ngaphandle kwe-CycleTraderPro, nanini!
UTom - Mercersburg, PA
Iingxelo zabathengi - Izikhombisi - Juni 21st
Ngexesha elifanelekileyo le-1 kunye ne-40 mins ndiphakame i-1,000 yokurhweba i-1 min chart ithengisa kuphela inkontileka ye-1 kunye ne-2 xa kufuneka. Uthengisa into ondibonise yona ... ngokwenene ukuxhalaba kuncinci ndibe ndathatha amashishini.
Andiqinisekanga ukuba nawuphi na umntu ngaphandle koko ubonisa umthamo njengesalathisi ngendlela oyenzayo. Kodwa yile ithikithi yegolide yokubona indlela! Umsebenzi omangalisayo!
Ngoku ndilindele ukuthabatha ude ndide ndibone i-VMIa Volume ihamba ngendlela efana nexabiso lexabiso kunye ne-BOOM! WOWU!
I-Bader, i-CA-NQ Day Trader
Iingxelo zabathengi - Izikhombisi - Juni 20th, 2019
Ndimthanda iVMI kunye nomgca oluhlaza ngeenombolo zebha. Umsebenzi omkhulu uJerome. Enkosi
UJoe V - NQ Trader
Ndazifumanisa xa ndifumene iinkqubo zeCycleTRADER Systems. iziphumo ezimangalisayo. I-Euro yenza i-$ 6335, kwaye enye i-$ 3800 ... Ndiyabulela kakhulu uJerome, wenza umsebenzi wembali ekuphuhliseni ezi nkqubo.
I-Bart D-System Trader eJamani
Ndiyithandile izibonakaliso emva kokuvavanya okunye - ndazithenga! Yiyo kanye into endiyithanda ngayo ukuthengisa. Kubonakala ngathi luncedo oluxabisekileyo oluyisebenzisayo ngexesha lokuthengisa kwangempela. Unayo imveliso enkulu kwiinjongo zam. Ndiyahambelana ngokucacileyo nendawo obeka kuyo ukuzisebenzisela iimarike.
UAdam C - Usuku loThengisi
Jerome - I-CT 34 Inkxaso / Ukunyanzela iWindows kunye ne-CT 09 Bar Volume Delta ayiyiyo.
Kuyamangalisa ukuba ndenza okungafaniyo ngokuqhelekileyo xa ndiza ku-delta bars, oko kukuthi bathengise ngokubomvu. Ngoku ndiza ewindow kwaye ndikhangele ukuthenga ngokubomvu kwaye ndithengise xa kuluhlaza ngenxa yokuba yindlela esebenza ngayo kwaye ndiyakwazi ukuyibona ngoku ukusuka kwiimpawu zoHlelo zoTywala.
Naluphi na, omnye umdlalo utshintsho kum. Ukulibulala leentsuku ezimbini ezidlulileyo nge-15 min delta ibha yetshati
Iingxelo zabathengi - Izikhombisi - Juni 19th, 2019
Jerome, - Amagama akakwazi ukuchaza ukusebenza komqhubi weeKhasi. Uvele unikezele abathengisi abaninzi izixhobo ezizenzekelayo ngokuzenzekelayo ukuze zifake i-market day and day out ... .com. Ngezibuyekezo ezininzi kunye nokuphuculwa okuphucula kwisofthiwe esele iyingqayizivele kwaye isebenzayo awunakuyeka ukumangalisa. Wena ungumqambi wokwenene, umthengisi wabathengisi.
Ukuhlala ulungelelaniso kwiimarike eziguqukayo ngonaphakade kodwa uhlala neendlela eziphambili. Ukuhlaziywa kutshanje kunye nomthamo omtsha we-delta bar kunye neenkxaso zenkxaso / iinjongo ezixhatshaziweyo / ezinqabileyo zifana nento endibonile ngaphambili. Uyazi ixesha lokujonga ukuthengisa nokuthenga ngaphandle kokukhubazeka kohlalutyo. Kunzima ukuza kuhweba namhlanje. Injongo yokuthengisa ngokupheleleyo.
Uninzi luya kuzuza nge software yakho. Ndingumthengisi omncinane (i-2-3 iikontrakthi) kunye neyinqabileyo engayifumananga nayo ngeplani ye-1K yosuku ngalunye usebenzisa i-software yakho. Kufana nokuba neeklasi ze-Xray kwaye unokulindela ukolweni okwenzekayo. Nje "landela izibalo" njengoko uthethayo. Ayikwazanga ukuba yinyani.
URobert - Umthengisi weSuku loThengisa umSebenzi.
Iziphumo zentsebenzo ye-Hypothetical zinezinto ezininzi ezithintekayo, ezinye zazo zichazwe ngezantsi. Akukho sakhiwo esenziwayo Ukuba nayiphi i-akhawunti iya kuba okanye ifumaneke inzuzo okanye iyalahlekelwa efanayo naleyo eboniswayo; Enyanisweni, kukho ulwahlulo olubukhali rhoqo phakathi kweempembelelo zokusebenza kunye neziphumo ezona zifezekiswe yiphina inkqubo yokurhweba.
Enye yeeMilinganiselo zempembelelo yokusebenza ngokukodwa kukuba kukuba zilungiswe ngokubanzi ngenzuzo yokujonga. Ukongezelela, ukuhweba kwe-Hypothetical hakubandakanyi umngcipheko wezezimali, kwaye akukho xwebhu lokuthengisa lwangokuthi luyakwazi ukuphendula ngokuthe ngqo ngempembelelo yomngcipheko wezoqoqosho. Umzekelo, ukukwazi ukuMelana nokulahlekelwa okanye ukunamathela kwiprogram ethile yokurhweba Ngaphandle kwezinto zokuthengisa ezilahlekileyo zizinto eziphathekayo ezinokuthi zithinte kakubi iziphumo zorhwebo.
Kukho ezinye izinto ezininzi ezinxulumene neemarike ngokubanzi okanye ekuphunyezweni kwanoma yiphina inkqubo efanelekileyo yokurhweba engenakulinganiswa ngokugcwele kwiCandelo lokulungiselela iziphumo zokusebenza kunye nazo zonke ezinokuthi zichaphazele kakubi iziphumo zokurhweba. Umngcipheko kwaye akusiyo wonke umtyalomali. Umtyalo-mali unako ukulahlekelwa yiyo yonke into okanye ngaphezulu kokutsalwa kotyalo. Umngcipheko mngcipheko yimali engahle ilahleke ngaphandle kokuphazamisa ukhuseleko lwezezimali okanye indlela yokuphila. Umngcipheko kuphela kufuneka usetyenziswe ukurhweba kwaye kuphela abo abanomngcipheko onobungozi obuninzi kufuneka baqwalasele ukurhweba. Ukusebenza kwangaphambili akubonakali ukuba kukho iziphumo ezizayo. Ukwazisa: utyalo-mali kwiziqinisekiso kunye nezinto ezibandakanya ubungozi kwaye akufanele kwenziwe ngaphandle kokuqonda yonke ingozi ephathelene nokuthengiswa kunye nokuthengwa kweziqinisekiso.
I-cycletrader, isofthiwe ye-profittrader echazwe apha yenzelwe isixhobo sokuncedisa abatyali-mali kwizigqibo zotyalo-mali. Unembopheleleko yodwa yokuvavanya nokugqiba ukuba yeyiphi na imimiselo yokubandakanyeka kuyo nayiphi na intsebenziswano, kunye nokuchonga ukufaneleka kokhetho lwakho.
Ngokutyalomali kwii-securities okanye iimpahla, unokulahlekelwa yimali yakho yonke. Ukusebenza kwangaphambili akuqinisekisi iziphumo ezizayo. Nayiphi na inkqubo yokurhweba ichazwe kule ndawo ingenakukwenza imali kwaye kufuneka uyiqonde ingozi ebandakanywe apha ngasentla.
Simele sixelele oku - Le ncwadana yenzelwe iinjongo zemfundo kuphela kwaye izimvo ezichazwe zizo zombonisi kuphela. Zonke izicwangciso ezinikezelweyo kufuneka zicatshungulwe kwaye zingalingeki ukuba ziphindwe kwiakhawunti yokuthengisa.
Iingqinisiso ezibonakala kule website zingabonakali kwabanye abathengi okanye abathengi kwaye akuyiyo isiqinisekiso sokusebenza okanye i-future future.